IBM Inobatana neCanonical Kushumira Iyo Yezvemabhizimusi Indasitiri | Linux Vakapindwa muropa
Diego ChiGerman Gonzalez | | Updated on 08/10/2019 18:06 | General, Noticias
IBM inoshanda pamwe neCanonical kupa mhinduro kumasangano emari
IBM inoshanda pamwe neCanonical. Microsoft shanda pamwe neGoogle kuvhura iyo Android foni. Kana ndikaramba ndichinyora aya marudzi ezvinyorwa, Linux Vapindwa muropa vanozove Mhoro! yeinuxrous bluesphere.
Saizvozvo, Haisi yezve rudo, ndeye bhizinesi. Kunyangwe imwe pfungwa yakaipa ingati izvo ndizvo chaizvo zvinoitika nevakaroorana vemagazini emoyo.
1 Nei IBM iri kubatana neCanonical?
2 Mamwe masevhisi akabatanidzwa anopiwa neBMM neCanonical
2.1 Dhijitari efa yekuchengetedza masevhisi
2.2 Mhinduro dzenyika dzine zviwanikwa zvishoma
3 Sei uchitenga Red Hat?
Nei IBM iri kubatana neCanonical?
Yange iri nguva yakareba kubvira makambani ese ari maviri anga achishanda pamwe chete. Musiyano uripo ikozvino IBM ine Red Hat. Uye, Red Hat inokwikwidza neCanonical yevatengi vakafanana izvo kubatana uku kuri kutarisa.
Izvo hazvina kumisa Mark Shuttleworth, muvambi uye CEO weCanonical, iyo mubereki kambani yeUbuntu Linux, naRoss Mauri, CEO weBM Z uye LinuxONE, ichaonekwa pamwe chete mumusangano nevatungamiriri vakuru inotarisira ruzivo rwekambani mumakambani emari emari.
Pachiitiko ichi, chakaitirwa muNew York City, vatungamiriri vaviri vakatsanangurira mamaneja iwo mabhenefiti ekumhanyisa masevhisi emari pane mainframe masisitimue mugore rakavakirwa Ubuntu Linux.
Iye zvino Nei IBM ichida Canonical apo Red Hat Enterprise Linux inogona kumhanya zvakakwana pamakomputa ako?
Mukubvunzurudzwa nehunyanzvi wepakati, Shuttleworth akatsanangura kuti:
Vatengi vanoda kuchengetedzwa kweiyo mainframe uye kuchinjika kweUbuntu. Vamwe vanobvunza nezve Ubuntu uye Z uye IBM inovapa iyo sarudzo.
Ini ndinodzokorora chirevo ichi kana zvanga zvisina kujeka kwauri
Vamwe vanobvunza nezve Ubuntu uye Z uye IBM inovapa iyo sarudzo.
Kambani yemakore zana senge IBM yaifanira kuuya kuzoyeuchidza yemahara software nharaunda iyo Chakavanzika chebudiriro kupa vashandisi izvo zvavanokumbira, kwete zvinoda vanogadzira kodhi.
Muvambi weCanonical haafunge kuti kutenga kweRed Hat kuchakanganisa chibvumirano.
Isu takasununguka kushanda neBMM. Isu tinoramba tichiita mapurojekiti anoshanda neZ, Simba uye IBM Cloud. Ubuntu iri kukura pane ese aya mapuratifomu.
Akatsanangura zvakare kuti musika wemakambani emari iwo avanotarisa unosanganisira.
Mabhangi akura nemakambani emari ari kutanga kunzwisisa gore uye maitiro matsva eDevOps futi. Zvimwe zvekutanga zvakare zviri kusanganisa Z neUbuntu.
Panguva yekuziva kutengwa kweRed Hat neBMM, Mark Shuttleworth anga anyora:
IBM kuwanikwa kweRed Hat inguva yakakosha mukukwira kwenzvimbo yakavhurika mune yepakati. Tinokorokotedza Red Hat nebasa rayakaita mukugadzira yakavhurika sosi sisitimu senge inozivikanwa uye inodzedzereka-yakaputirwa -mutsika yechinyakare UNIX mune 'Wintel' mazwi. Mupfungwa iyoyo, RHEL yaive nhanho yakakosha mukufambisa kwakasununguka sosi.
Zvisinei, nyika yakaenderera mberi. Kutsiva UNIX hakuchakwanise. RHEL inononoka kukura, kusiyana nekukasira kweLinux mune zvese, chiratidzo chakasimba chemusika cheiyo inotevera mhepo yevhu rakavhurika.
… Kufamba nekumhanya kwevanogadzira zvinoreva kukumbundira sosi yakavhurika munzira dzakatungamira kumakambani makuru epasirese, kutanga kwenyika nekukurumidza, nevaya vanotenda kuti chengetedzo nekumhanyisa zvinogadziriswa pamwe chete, kuvimba neUbuntu.
Mamwe masevhisi akabatanidzwa anopiwa neBMM neCanonical
Dhijitari efa yekuchengetedza masevhisi
Ndicho system kuchengetedza zvakachengeteka zvibvumiranouye, panguva imwe chete, ipa nekukurumidza kuwana kune zvigadzirwa zvemadhijitari.
Iri sevhisi rinoshanda pane IBM LinuxONE maseva ane Ubuntu seanoshanda system. Iyo hardware chikuva zvakare yakavakirwa pane IBM Crypto Express 6S Hardware Security Modules.
Mhinduro dzenyika dzine zviwanikwa zvishoma
Kunyangwe pasina zvakawanda zvakawandisa, zvinozivikanwa kuti IBM neCanonical vari kushanda pamwe chete neSLIB, kambani yekuFrance software yekuchengetedza; Phoenix Systems, kambani yeSwitzerland inehunyanzvi mukupa mukana wedhijitari; uye Plastic Bank, ikambani yakasvibirira yakasvibirira. Chinangwa ndechekuti gadzira mhinduro dzemari dzenyika dzakabatwa nehurombo.
Sei uchitenga Red Hat?
Vamwe vaongorori veindasitiri havatende kuti Red Hat uye IBM inoramba iri zvikamu zvakasiyana kwenguva refu. Muchokwadi, vanofungidzira kuti Jim Whitehurst, mukuru weRed Hat, achazobudirira Ginni Rommetty ari mubatsiri weBM munguva pfupi.
Kubva zvakatadza kupindura kunetso kwema clones mumazuva ekutanga ekombuta, IBM yakawedzera kurasikirwa nehutungamiriri. Kunyangwe vaongorori vayo vachiramba vachivandudza mhinduro, iyo femu haigone kuzvidudzira muzvigadzirwa zvinobudirira mumusika. Izvo zvakare zvinoita sekunge hazvinyatso kushanda mukukwezva vatengi kubva kumakambani matsva mune mamwe echinyakare zvikamu kana kutanga muzvikamu zvitsva.
Mufungo uyu ndewekuti chakatengwa chaive chisiri cheRed Hat brand kana matekinoroji ayo. Izvo zvakatengwa itsika yehunyanzvi uye sevhisi yakashandura iyo kuita yakabudirira kwazvo firm mune yakavhurika sosi yenyika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » IBM inoshanda pamwe neCanonical kuti ipe masevhisi indasitiri yezvemari